Mifoha Indray Ao Ozbekistàna Ve ny Gadona Rap? · Global Voices teny Malagasy
Mifoha Indray Ao Ozbekistàna Ve ny Gadona Rap?
Voadika ny 05 Febroary 2017 4:15 GMT
Radius 21 – iray amn'ireo Ozbek goavan'ny gadona Rap, taona maro tany aloha tany. Pikantsary avy amin'ny rakikira Youtube tamin'ilay lahatsarin-kira ‘Drama’ nakarin'i Para Machi.
Lahatsoratra mpiaramiasa avy ao amin'ny EurasiaNet.org ity manaraka ity. Naverina navoaka etoana miaraka amin'ny fanomezandàlana.
Nisy fotoana tao Ozbekistana naha-ratsy ny fahitàna ny hip-hop sy tsy dia nahazoanny loatra ny toerana maha-nentindrazana azy ka noho izay toejavatra izay dia noraràna tsy hiakatra sehatra ho hitan'ny daholobe.
Niàla avy any amin'ny hoe fetiben'ny mpianatra izay natao tamin'ny volana lasa, anefa, dia toa niova fijery ireo manampahefàna. Nampiantranoin'ny fetibe “Ny Tontolo Jerena Amin'ny Mason'ireo Mpianatra”, ankoatry ny zavatra hafa, ny fifanintsanana mivantana ifanaovan'ireo DJs sy ny mpanakanto mpiangaly hip-hop, araka ny lazain'ny tranonkalam-baovao ut.uz .
Ny hery nanosika tao ambadik'ilay teikasa dia Abbos Tamatov, mpianatra iray amin'ny taona fahefatra ao amin'ny kolejy Ozbek iray fianarana zavakanto.
“Maherin'ny zato ireo olona avy amin'ny lafivalon'ny firenena no naneho ny fahalinan'izy ireo handray anjara amin'ilay fifaninanana,” hoy i Tamatov tamin'ny ut.uz. “Tsy maintsy ambarako fa somary tsy dia natoky loatra aho hoe ho avelan-dry zareo hanatontosa ilay fifaninanana izahay.”
Tamatov nilaza tamin'ny EurasiaNet.org hoe ny drafitra manaraka hataony dia ny himpivondrona ireo artista sangany rehetra mpiangaly rap manerana ny firenena ary hampanao fifaninanana goavana amin'izy ireny, mba hampitombo ny lazan'ny hip-hop eny anivon'ny vahoaka. Hetsika ankafizin'ity mpianatra ity manokana ny an'ilay Ozbek mpiangaly rap, Shohruh sy ilay kintana Rosiana, Basta.
Miavaka ilay hetsika ataon'i Tamatov noho ny zavamisy hoe gadona iray niharan'ny fahirano tsy nolazaina ambava ny hip-hop hatramin'ny 2011.Ny Febroary tamin'io taona io, nisy fantson'ny tanora Ozbek nandefa fanadihadiana iray nitondra ny lohateny hoe “Rotsy sy Antambo” izay niteraka kiana henjana momba ny mozika tandrefana, ary voasingana manokana tamin'izany ny gadona rap. Toy ny “rahona mainty mitatao amin'ny tanora Ozbek” no namaritan'ilay fandaharana io karazana gadona mozika io.” Tamin'ny fanomezana porofo, nohamafisiny fa ny “gadona rock dia avy amin'ny fomba ama-panao afrikàna rehefa mihaza” ary ny “rap dia avy any am-ponja no niaviany, izay no mahatonga ireo mpiangaly rap manao pataloha malalaka be sy lava.”
“Ny herin'ny maizina no namorona io mozikan'i satàna io mba ho tonga amin'ny famotehana tanteraka ny fitondrantenan'ny tanora any amin'ireo firenena tandrefana,” hoy ilay fanadihadiana.
Nampiasaina ho toy ny hafatra ankolaka handraràna ireny karazana ireny ilay fanadihadiana. Ny Aprily 2011, nemetraka antokon-draharaha ny governemanta mba hatokana fotsny ho amin'ny fanivànana ny mozika rap. Nentanina ireo mpiangaly Hip-hop hanary ny nofinofiny tsy hiditra aminà ratsitoavina na shenanigans toy ny gangsters tahaka izany, ary hihira be kokoa momba ireo soatoavina neken'ny fanjakàna, toy ny tsy fivadihana, ny hatsarantoetra ary ny fitiavana ny fianakavian'ny tena.
Napetraka ho andraikitry ny filankevitra iray tao amin'ny governemanta natao hanaraka akaiky ity hevitra ity ny fanangànana angondrakitra iray hisy ireo mpiangaly rap ary hampanao dinika an-databatra indray mandeha isambolana mba “handrindràna” ny asan'ireo mpiangaly mozika.
Shohruh Shadmanov, ilay artista 31 taona nandrian'ny fon'i Tatatov manokana, no angamba mitarika ny lohany ao anatin'ny sehatry ny filalaovana hip-hop Ozbek. Ilay hirany tamin'ny taona Hit 2008, Hato (“Mistake”) no be mpahalala indrindra. Ireo hafa misongadina dia ahitàna ny toa an-dry Shahriyor sy Timsi.
Na eo aza ny toerana ofisialy tsy tia hip-hop noraisin'ny fanjakana, mazava ny zavamisy fa tsy nanjavna tanteraka ilay gadona no sady nanohy nihira ireo mpihira azy mba hamoaka rakikira, sy lahatsarin-kira — na dia nokajiana fatratra aza ny tsy hisian'ny fanafintohinana tsy misy dikany. Eny tokoa, toa tsy nanànan'i Timsi kakay ilay filoha efa nodimandry, Islam Karimo, izay ny fotokeviny tsy miala amin'ny nentindrazana dia toy ny nanome vàhana ny fanilihana ireo mozika miloko tandrefana, na Rosiana amin'izao fotoana izao, ary nandeha lavidavitra kokoa tonga hatramin'ny fanolorana hira fanasohasoana azy taorian'ny fahafatesany.
Noharabain'ilay Ozbek mpanao gazety, mpanolotra fandaharana momba ny fandraharahàna, ny fiverenana tsy hoe elan'ireo mpiangaly hip-hop eny an-tsehatra, ary nilaza ho ravo izy hoe ho afaka indray ry zareo ireny hanao fampisehoana imasom-bahoaka.
“Tia rap ry zareo ao Ozbekistàna ary iray amin'ireo mpiantsehatra manao izany amin'ny fiteny Ozbek i Shohruh. Amin'ny Martsa amin'ity taona ity, efa misy sahady vinavina hanao kaonseritra mandritry ny andro roa ao Tashkent aminà lampihazo goavana,” hoy izy tamin'ny EurasiaNet.org.